Wax Ka Ogow Taariikhda Lamaanha Qaxootiga Ah Ee Soo Saaray Talaalka Covid-19 AwdalMedia Awdalmedia Wax Ka Ogow Taariikhda Lamaanha Qaxootiga Ah Ee Soo Saaray Talaalka Covid-19
Caalamka ayaa u dabaaldagaya guulaha laga gaadhay helitaanka talaalka caabuqa coronavirus maalmahan dambe, waxa guushaas kala jiidanaya shirkado waawayn iyo dalal mid walba dhankiisa u doonayo in lagu sunto magaca guushan la gaadhay, balse waxa jirta qiso tan ka duwan oo la ah mida suura galisay helitaanka talaalka covid-19 oo la iska indho tiray, waxana ay su’aashu tahay waa kuwama Lammaanaha qoxootiga ah ee ka dambeeya soo saarista tallaalka coronavirus?
Waa Prof. Ugar Sahin iyo xaaskiisa Özlem Türeci oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga, oo qaxootinimo ku galay Yurub, haatana ku nool dalka Jarmalka.
Sheekada Lamaanahan soo saaray talaalka covid-19 ayaa waxa ay sumad u tahay guulaha caalamku iska indho-tirayo ee ay magan-galyo doon ku soo hooyeen.
Hamiga lamaanahan ee manta hirgalay ayaa hilin-dheer soo qaaday, waqtina ahaa riyo lala yaabo oo ay ku hamiyayaan, waxana xusid mudan in kasta oo raadinta tallaalka covid-19 ee ay ku guulayteen ay maal-gelisay shirkadda weyn ee dawooyinka ee Pfizer ee laga leeyahay dalka Maraykanka, haddana ay tiknoolajiyadda loo isticmaalay helitaanka talaalkan ay ahayd mid ay leedahay shirkadda BioNTech, oo ah shirkad Jarmal ah oo ay aasaaseen lamaane-han ah carruurta muhaajiriin Turki ah.
Prof. Ugur Sahin wuxuu ku dhashay magaalada Iskenderun ee dalka Turkiga oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago Suuriya. Markii uu afar jirka ahaa ayay Prof Sahin qoyskiisu u haajireen dhinaca Yurub, waxana uu cagaha dhigay qoyskoodu dalkii Jarmalka Galbeed. Aabihiis wuxuu ahaa shaqaalaha irida hore iyo soo dhawaynta u qaabilsan warshad baabuurta samaysa oo Ford lagu magacaabo, waxana uu nolosha ka bilaabay magaalda Cologne ee dalkaasi jarmalka, halkaas oo hooyadii iyoqoyska intiisa kalena ay ugu yimaadeen.
Waqtigaas dalkaas Jarmalka Galbeed soo galootiga laga soo dhawaynayn, waxana loo arkayay dadka maganyo-doonka eek u sugan ee uu ka mid ahaa qoyska prof. Sahin shaqaale ku meel gaadh ah, rajada ay ku iyaga iyo qoysaskaska kale ee soo-galootiga ahna waxa ay ahayd mid yar.
Markii uu yaraa, Prof. Sahin wuxuu la halgamay nolosha iyo sidii uu uga rumeyn lahaa riyadiisa ah inuu guul ka soo hooyo dhinaca daawada—waxa ayna tani ahayd mid aan la rumaysan Karin, marka la arko ama la xuso in ninka hamigiisu sareeyo uu yahay uu dhalay aabe qaxooti ahaa oo hadana ay shaqadiisu ahayd waashmaan—waxase uu caafimaadka ka bartay jaamacadaha magalooyinka Kologne iyo Homburg wuxuuna ku takhasusay daaweynta kansarka.
Intii uu ka shaqaynayay cisbitaalada kansarka ee Homburg ayuu Prof. Sohin la kulmay xaaskiisa mustaqbalka Dr. Know Türeci. Oo iyaduna ku takhasustay daawaynta Kansarka, waxana la rumaysan yahay in Dr. Türeci aabaheed uu ka soo haajiray magaalada Istambuul ee dalka Tukiga, iyaduna ay ku dhalatay dalka Jarmalka.
Maanta Prof. Sahin iyo xaaskiisa lemzlem Türeci waxay ka mid yihiin 100-ka qof ee ugu taajirsan Jarmalka. Waxana xusid mudan in qiimaha saamiga sharkadooda BioNTech uu kor u kacay illaa $ 21 bilyan oo doolar ka dib guushii ay ka soo hooyeen tallaalka covid-19.